Nagu saabsan - Tianfeng Qalabka Qalabka Deegaanka Teknolojiyada Co., Ltd.
Qalabka Teknolojiyada Deegaanka Co., Ltd.
Waxaan haynaa wax ka badan 10 + sano oo khibrad wax soo saar ah
Waxaan nahay hogaamiye takhasus ku leh xakamaynta infekshinka, soosaarida bakteeriyada iyo ololka-daahfurka daahyada la tuuro. Alaabtayada tayada sare leh, waxaan ka mid noqonay shirkadaha ugu kalsoonida badan warshadaha xarunta caafimaadka.
Ballanqaadkeenna ku aaddan gaarsiinta natiijooyinka ayaa noo suurtageliyay in aan dhisno xiriir dheer oo aan la leenahay macaamiisheenna adduunka oo dhan oo aan raacno ballanqaadyadeena markasta.
Suzhou Tianfeng Qalabka Qalabka Deegaanka, oo la aasaasay 2008, waa shirkad dhammaystiran oo ku takhasustay daahyo isbitaal oo tayo sare leh oo leh awood cilmi baaris iyo horumarineed, qaabeyn iyo wax soo saar. Alaabtayada waxaa ka mid ah daahyada caadiga ah ee la tuuri karo, daahyada mesh iyo daahyada daabacan. Dhammaantood waxay leeyihiin qabsatooyin iyo calaamadda kuleylka oo ku lifaaqan. Daahfuradeenna jiilka cusub ee la tuuri karo ayaa loogu talagalay inay ku beddelaan daahyada jira ee dib loo isticmaali karo iyo kuwa la dhaqi karo iyadoo la adeegsanayo keyd qiimo badan iyo xakameynta infekshinka oo hagaagay.
Khadka wax soo saarka POLYPROPYLENE
Khadkan wax soosaarka ayaa ah dunta polypropylene-ka ah ee dunta leh ee dunta ku xidha qalabka dharka aan dharka lahayn. Qalabkeeda ceyriin waa polypropylene (PP). Dharka aan soosaarayn ee aan soo saarnay wuxuu leeyahay awood sare, jilicsanaan wanaagsan, aan waxba galabsan, anti-bakteeriyada, iska caabinta daxalka, heerka sawirada heerka sare iyo dheereynta. Midabka iyo culeyska dharka ayaa ka duwanaan kara hadba baahida macaamiisha.
13+ sano oo khibrad soosaarid daahyada cubicle ee la tuuri karo.
Loo muujiyey inuu buuxiyo heerarka caalamiga ah ee bakteeriyada ka hortaga iyo ololka.
Khadka madax-bannaan ee wax soo saarka bakteeriyada.